အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ်? အကောင်းဆုံး အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ်
ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Taiwan အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံတွေနှစ်အတွင်းကောင်းမှုတန်းပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်ခံကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းအာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်တဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်မှီခိုအားထားလွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။
ပုံစံ - High temperature curing epoxy Type-8190
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ဒီဇိုင်းတစ်ခု epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.အဆိုပါစေးစနစ်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးအလွန်ထူထပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်-ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်.မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းရှိသည်,နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာကော်အခြားသမားရိုးကျ amine epoxy ဗဓေလသစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.ပိုမိုမာလာသည်-EP-2007-8190 တွင်မြင့်မားသောအပူပုံပျက်အပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.ခြောက်သွေ့တဲ့အခြေအနေ-EP-2007-8190 မုန့်ဖုတ်အချိန်နှင့်အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,မုန့်ဖုတ်အချိန်တိုတောင်း.မြင့်မားသောပြီးနောက်-အပူချိန်ကုသ,အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသောအပူချိန်မှာရရှိနိုင်ပါသည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုပျောက်ကင်းစေသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 200oC အထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုနှုန်းရှိသည်.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ဆေးထိုးမှို,သတ္တုများ,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,အဖြစ်လျှပ်စစ်သံလိုက်,အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ,လေကြောင်း,မော်တော်ကားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများ.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် ECRoHS 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/heat-resistant-epoxy-resin.html
အကောင်းဆုံး အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အပူဒဏ်ခံ Epoxy ဗဓေလသစ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ခု epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.ဤဗဓေလသစ်စနစ်သည်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများအတွက်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောနှောင်ကြိုးသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီးခိုင်မာသည့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်.မာကြောသောပစ္စည်းများသည်ပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,SOAR ၏နှောင်ကြိုးအစွမ်းသတ္တိကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှုနှုန်း-EP-2007-မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ 8190 သည်အခြားဘုံအမင်ခိုင်မာ epoxy ဗဓေလသစ်များထက်သာလွန်သည်.ပိုမိုမာလာသည်-EP-2007-8190 တွင်အပူမြင့်သောပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်.SOAR ၏တင်းမာအခြေအနေများ-EP-2007-8190 သည်အချိန်နှင့်မုန့်ဖုတ်အပူချိန်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,လိုအပ်သည်တိုတောင်းမုန့်ဖုတ်အချိန်.ဒီဗဓေလသစ်ပြီးနောက်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသသည်,အကောင်းဆုံးသောအမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေးနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကိုရရှိနိုင်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 ရှည်နိုင်သည်-စိုထိုင်းဆကျယ်ပြန့်အတွက် term ကိုဓာတ်တိုးခုခံနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခိုင်မာစေ၏,နှင့် SOAR-EP-2007-8190 သည် 200oC ထက်ကျော်လွန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောဓာတ်ပြုခြင်းရှိသည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ပြုတ်ရည်,ပုံသွန်း,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,နှင့်လျှပ်စစ်စက်ယန္တရား၏လယ်ပြင်၌ထင်ရှား။ ,,အီလက်ထရောနစ်,လေကြောင်း,မော်တော်ကားနှင့်အပန်းဖြေ...စသည်တို့. ဤဗဓေလသစ်သည်အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေးချိန်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95EC RoHS စည်းမျဉ်းများ.
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်တီထွင်ထားတဲ့ epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.အဆိုပါစေးစနစ်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တင်းကျပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကွန်ယက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်-လင့်များ.မာကြောသောပစ္စည်းများသည်ပုံပျက်သောအပူချိန်မြင့်မားသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အခြားဘုံ amine ကုသသော epoxy resins များထက်မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်နှောင်ကြိုးခိုင်မာမှုနှုန်းကိုမြင့်မားစေသည်.ပျောက်ကင်းသွားသည်-EP-2007-8190 တွင်မြင့်မားသောအပူပုံပျက်အပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.SOAR ၏ကုသမှုအခြေအနေများ-EP-2007-8190 သည်အချိန်နှင့်မုန့်ဖုတ်အပူချိန်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,လိုအပ်သည်တိုတောင်းမုန့်ဖုတ်အချိန်.မြင့်မားသောအပူချိန်ကုသပြီးနောက်,အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရရှိနိုင်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 ရှည်နိုင်သည်-သက်တမ်းဓာတ်တိုးခံနိုင်ရည်နှင့်စိုထိုင်းဆ၏ကျယ်ပြန့အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုပျောက်ကင်းစေသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 200oC အထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုမြန်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ဆေးထိုးမှို,ပုံသွန်း,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,နှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်၌တည်၏,အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ,လေကြောင်း,မော်တော်ကားနှင့်အပန်းဖြေလယ်ကွင်း. အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအလိုအလျောက်စက်မှုအလေးချိန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့သင့်လျော်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 2002 နှင့်ကိုက်ညီသည်/95 ECRoHS စည်းမျဉ်းများ.
မြင့်မားသောအပူ Epoxy ဗဓေလသစ်
ပျံဝဲ-EP-2007-8190-မြင့်မားသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်တီထွင်ထားတဲ့ epoxy ဗဓေလသစ်ကော်.အဆိုပါစေးစနစ်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်နှင့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်အထူးမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးအလွန်ထူထပ်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်-ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်.မာကြောထားသောပစ္စည်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပုံပျက်သောအပူချိန်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုနှင့်စိုထိုင်းဆခုခံ;ဖြည့်စွက်ကာ,ပျံဝဲ-EP-2007-8190 တွင်၎င်းတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားထိန်းသိမ်းမှုနှုန်းရှိသည်,နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်မှာ၎င်း၏ကော်အခြားဘုံ amine epoxy ဗဓေလသစ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်.အဆိုပါပျောက်ကင်းအောင်ကုသနေ-EP-2007-8190 တွင်မြင့်မားသောအပူပုံပျက်အပူချိန်ရှိသည်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိသည်,မြင့်မားသောအပူချိန်တွင်ပင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်.SOAR ၏ခြောက်သွေ့အခြေအနေများ-EP-2007-8190 မုန့်ဖုတ်အချိန်နှင့်အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်.မုန့်ဖုတ်အပူချိန်ပိုမိုမြင့်မား,လိုအပ်သည်တိုတောင်းမုန့်ဖုတ်အချိန်.မြင့်မားသောအပူချိန်ကုသပြီးနောက်,အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရရှိနိုင်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 ရှည်နိုင်သည်-သက်တမ်းဓာတ်တိုးခံနိုင်ရည်နှင့်စိုထိုင်းဆ၏ကျယ်ပြန့အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုပျောက်ကင်းစေသည်.ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် 200oC အထက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလွန်မြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုမြန်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 lamination အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်,ဆေးထိုးမှို,ပုံသွန်း,အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်ကော်,အဖြစ်လျှပ်စစ်သံလိုက်,အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ,လေကြောင်း,မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးလယ်ကွင်း. အဆိုပါဗဓေလသစ်ကိုအလိုအလျောက်စက်မှုအလေးချိန်နှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့သင့်လျော်သည်. ပျံဝဲ-EP-2007-8190 သည် ECRoHS စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ၂၀၀၂ နှင့်ကိုက်ညီသည်/95.